Dib u kicinta Wadnaha Gaaldiid
Dib u kicinta Wadnaha
Bogga Hore > Causes > Dib u kicinta Wadnaha
1 Habka loo badbaadiyo Ruux Wadnuhu dhacay.
2 Camaliyada dib ukicinta Wadnaha.
Habka loo badbaadiyo Ruux Wadnuhu dhacay.
Dib usoo kicinta Wadnaha (CPR) waa gargaarka degdega ah ee la siiyo ruuxa wadnuhu istaagay ama aan neefsankarayn si loo soo celiyo dhaqdhaqaaqa wadnaha iyo wareega dhiiga.
Si aad ufuliso camaliyadan uma baahnid wax qalab ah waxaana fulin kara qofkasta, waana arrin muhiima in aad waxun ka taqaano haba yaraatee si aad u badbaadiso ruux neeftu ku dhagtay ama wadnihiisu dhacay.
Waxaad ku baran kartaa kooraskan waqti yar gudahii, kaliya sifiican u akhri maqaalkan waxaanan rajaynayaa inuu ku anfaco inshallah oo aad badbaadiso ruux wadnuhu istaagay.
Sidoo kale waxaan soo diyaarin doona qaab maqal iyo muuqaal ah inshallah.
Markaad camaliyadan fulinayso waxaad bilaabaysaa cadaadinta Xabadka. Waxaad isticmaalaysaa gacmaha adoo si fudud u cadaadinaya Xabadka ruuxa miyirka la’ si dhiiga u sii wado wareega socodkiisa, sidoo kale waxaad naqas (oxygen) siinaysaa qofka suuxsan adoo afuufaya afka ruuxa, kadibna waxad sii wadaysaa cadaadinta xabadka.
Caruurta iyo dumarka uurka leh way kaduwanyihiin dadka waaweyn ama kuwa caafimaadka qaba laakiin haday xaaladu tahay mid degdeg ah waxaad ku fulin kartaa camaliyada ruuxa qaangaadhay.
Waxyaalaha sababa wadnaha oo dhaca.
Ruuxa wadnuhu istaago ee miyir beela waxa istaaga sidoo kale neefsahada. Ruuxa wadnuhu dhaco waxa uu ku miyirbeelaya mudo 10-20 ilbidhiqsi. Kadibna naqas qaadashada ayaa istaagaysa.
Hadii ruuxu marka hore Naqasku ku dhago sidoo kale wadnuhuna wuu dhacayaa mudo yar gudaheed.
Sababta ugu wayn ee wadnuhu la dhaco waa ruuxa oo leh xanuunaka Wadnaha.
Sidoo kale waxyaalaha sababa naqaska (oxygen) oo sitaagta waa xanuunka Astma (Xiiqda) ama shay ku xayirma hunguriga sida cuntada iwm.
Sidoo kale aafooyinka dabiiciga ahna way keeni karaan in qofka wadnuha iyo Naqskuba istaagaan sida ruuxa oo qarqooma, ama sumooba.
Hadii ruuxu isticmaalo dawooyin xadkii loogu talo galay ka baxsan ayaduna waxay keeni kartaa in ruuxa wadnihiisu shaqada joojiyo.
Oxygen oo yaraataa waxay keensanaysaa..
Marka wadnuhu uu istaago ama neefqaadashadu istaagto jidhku ma helayo Oxygen ku filan. Maskaxduna waa xubinta ugu xasaasisan marka ay Oygentu yaraato. Hadii neeftu si dhakhso ah u iman waydo waxa ruuxu khatar ugu jiraa in dhaawac maskaxda kasoo gaadho. Dhaawucuna waxa uu dhici karaa marka oxygen la la’yahay mudo 3- 4 daqiiqo.
Hadii jidhku qabowyahay oo aan xaaladiisu stress ahayn waqti dheeraad ahbaa laga yaaba inay qaadato.
Waa maxay ujeedada camaliyadu?
Ujeedadu waa inaan isku dayno in aynu kicino wadnaha illamaayo shaqaalaha caafimaadku kuu imanayaan.
Marka koowaad ka fogow Xaalada halista kuu keeni karta.
Haddii aad qof badbaadinayso suuxsan ama miyirbeelay waa inaad iska hubisaa goobta inay tahay amaan si aadan u biimayn naftaada. Tusaale ahaan haddii ruuxa suuxsan yaalo wado ay ka agdhowdahay kaalin shiidaal oo gubanaysa sidoo kalena ay halis tahay inaad naftaada waxyeelo soo gaadho ka fogow intaad awoodo. Sababtoo ah markasta waxaad adigu masuul ka tahay naftaada. Haddii aanay halis jirin waxaad kontoroosha ruuxu inuu suuxsanyahay iyo inkale.
Ma Miyir Qabaa ruuxu?
Marka xigta isku day inaad qofka la hadasho kadibna yara ruxdo jidhkiisa garbaha iyo gacmaha si aad u hesho wax fal celin ah. Ruuxa hurda inta badan waa ku toosaa marka la taabto.
Haddii aad wax jawaab ah aanad helin waxa ad ula dhaqmaysaa sida qof miyir la’.
Ma neefsanayaa ruuxu?
Tallabada xigta waa inaad baadhaa in ruuxu neefsanayo adoo fiirinaya in laabtiisu kor u kacayso sidoo kale dhagta saar Sanka ruuxa. Haddi uu neefasanyo balse ay ku adagtahay neeftu waxaad furtaa marinka hawada adoo sare u qaadaya garka ruuxa ku qabanayan labada farood, gacantaada kalena saaraya fooda kadibna gadaal ayaad u leexinaysa madaxa ruuxa.
Haddii aanu neefsanayn ruuxu waxaad bilowdaa camaliyada dib u kicinta wadnaha.
Intaanad bilaabin camaliyada dib u kicinta wadnaha raadso qof ku caawiya hadii aad heli karto si uu kuugu waco xarunta caafimaadka ama ambulanska. Kadibna bilow CPR camaliyada dib u istaadhida wadnaha. Sababtoo ah fursada ah in ruuxu noolaado ayaa sare u kacaysa markaad samayso 2- 3 jeer.
Waxaad si dhakhso ah u shaqaynaysaa markaad haysato ruux kale oo ku caawinaya laakiin haddii aad kaligaa tahay marka ugu horeysa adigu wac xarunta caafimaad ama ambulanska.
Maxaan sameeyaa haddii Qofku suuxsanyahay balse uu Neefsanayo.
Haddii uu ruuxu neefta sifiican u qaadanayo laakiin uu miyirla’yahay ma samaynaysid camaliyada dib ukicinta Wadnaha sababtoo ah ruuxa wadnihiisu waa shaqaynayaa waxana laga yaaba in daal awgii uu ruuxu u miyir beelay. Hadayso dhacdo inuu neefsanayo ruuxu waxaad u dhigtaa ruuxa dhabarka adoo dhinac ka fadhiisanaya.
Kadibna dhinaca ayaad udhigaysaa ruuxa gaar haan dhankaa aad ka fadhido adoo gacantiisa kaasoo horjeeda madaxiisa barkinaya, intaa kadib lugahiisu yaanay is dul fuulin ee kala qaada. Kadibana marinka hawada u fur sidaan hore usoo sheegnay, garkiisa laba farood ku qabo, gacantaada kalena foodiisa saar oo gadaal madaxiisa u yara leexi si aad ugu sahasho in hunguriga uu furanyahay. Mararka qaarkood carrabka qofka fiiri inuu ku dhaganyahay dhanxanaga kadibana si qunyar ah u soo dhufo carrabka.
Hadii neefta uusan ka qaadan karayn sanka oo laga yaabo inay duuf ama shay kale sanka ku awdanyahay waxaad furtaa Afka ruuxa sii uu afka uga neefsado.
Camaliyada dib ukicinta Wadnaha.
Haddii ruuxu uu miyirbeelay sidoo kalena aanu neefsanayn waxa haboon inaad sida ugu dhakhsaha badan u bilowdo camaliyada. Waxaanad samaynaysaa qodabada soo socda, sifiicana u raac.
Ruuxa waa inuu dhabarka u yaal.
Gacmhaaga dul saar xabadkiisa (laabta) kadiban gacmahaaga oo siman ku cadaadi 5 – 6 cm oo hoos ah. Gacmahaaga waa inay simanyihiin adoo adeegsana baabacada oo si dhakhso ah u wad.
Cadaadiska ayaad wadaysaa 30 jeer xawaaruhuna ha noqdo mid dhakhso ah.
Cadaadiska kadib waxaad afka kaga afuufaysaa naqas adoo furaya marinka hawada kadibna qabo (xidh) sankiisa kuna afuuf laba jeer naqas si taxadar ah illamaayo intaad arkaysid Laabta ruuxa suuxsan oo kor u kacday. Haddi aanu xabbadku sare u kicin waxaad illowday inaad sanka xidho ama aad furto marinka hawada ee hunguriga. Qaabkaad u furaysona hore ayaan u soo sheeganay.
Laba Naqas ood ku afuuftid kadib waxaad bilaabaysaa cadaadiskii xabadka adoo sii daynaya ama furaya Sanka. Cadaadi xabadka sidii hore oo kle
Sidaas ayaad wadaysaa illamaayo ay kuu imanayaan shaqaalaha caafimaadku.
Haddii aanad ku dhacayn inaad ruuxa afka afka u saartoo ood naqas ku afuufto waxaad adeegsan kartaa warqad ama shay ubucdiisu daloosho si naqasku u gaadho ruuxa.
Jooji camaliyada haddii ruuxu neefsado, qufaco ama uu is dhaqaajiyo. Kuna dadaal inaad ruuxa si dabacsan wax ugu fasirto sababtoo ah ruuxu waa warwarsanyahay.
Waa shaqo culus ood ku daali karto markaad dhowr jeer ku celceliso cadaadiska xabadka iyo naqas siinta, markaa waxa fiican inaad u nasato si qof kale kuu caawiyo haddii aaad kaligaa tahayna la tacaal waa intaasu Eebe wayne gacantaada kuugu qoray inaad ruuxaas badbaadisee.
Shaqaalaha caafimaadku markay goobta yimaadaan ee ay kaala wareegaan daryeelka ruuxa waxaad u sheegataa inta daqiiqo ee aad waday Camaliyada dib u kicinta wadnaha.
Wadna kiciyahay (Defibrillator)
Waxa inta badan goobaha dadku ku badnyihiin sida goobaha basaska laga raaco ama meel u dhow xarun caafimaad ama garoonada diyaaradaha waxa yaala Wadne kiciye kuwaas oo u shaqeeya qaab Automatic. Mashiinka waxa uu ku siinaya macluumaad codaysan ood si fudud u raaci kartid. Waxaanu sheegaya in ruuxa wadnihiisu istaagay iyo inkale.
Qaabkee ayaad u isticmaalaysaa wadne kiciyahay (defibrilltor)
Marka koowaad shaatiga ka siib ruuxa suuxsan una dhig dhabarka, kadibna wadna kiciyaha ayaa ka dhagaysanaysaa macluumaadka adoo taabanaya badhinka Start ama On. Mashiinku waxa uu hareerta ku wataa laba xaashi oo ay ku sawirantahay meesha jirka lagaga dhajinayo. Waxa laga dhajinayaa naaska bidix hoostiisa ka kalena waxa lagu dhajinayaa feedha midig. Waxay si waadixa ugu sawrintahay Wadna kiciyaha. Mashiinku waxa uu ku farayaa inaanad taabanin ruuxa mudo yar kadibna waxa uu kuu sheegayaa inaad bilawdo cadaadiskii iyo neefsiintii.
Waxa mahad iska leh Eebe Wayne, haddii aad ka faaidaysatay hayga ilaawina ducada walaal.
Khayrbaan idiin rajaynaya, ka faaidayso oo wax ka baro si ay kuu anfacdo maalin siina gudbi oo share garee si dad badani uga faa’idaystaan oo aad ajar adiguna ku yeelato.
Inshallah waxaan soo duubidoonaa video aan ku sharrixi doona camaliyada.